Fankalazana ny iray volana ho any ankizy
Filaharana sy fampisehoana nataon’ireo Ankizy teto Toamasina
Ankizy madinika miisa 11000 avy amin’ny sekoly enina amby enipolo no nandray anjara tamin`ny fankalazana ny iray volana ho any ankizy, izay natao tetsy amin`ny kianja ny municipale Toamasina ny androny zoma, faha 6 jona 2014, lasa teo.
Ny volana jona dia volana natokana ho iray volana ho any ankizy madinika. Nanamarika izany iray volana ho an’ny ankizy izany ny kilonga madinika teto Toamasina, izay nokarakarain’ny AECAPTO tao amin`ny kianja ny municipale Toamasina, ny zoma, 6 jona 2014.
Ny lohahevitra nitsoahana tamin`ny izany dia
“Ny fiarovana ny ankizy amin`ny ireo fomba mampanao sy kolotsaina manimba ny andraikitra iombonana”.
Io no teny filamatra izay noentina nankalaza an’izany iray volana ho any ankizy tamin`ny ity taona Ity. Tonga nanome voninahitra an’izany ny mpitondra fanjakana teto antoerana, izay notarihin’ny Atoa TALATA Michel. Kabary nifandimbiazan’ny ireo manampahefana sy ny olona nasaina no nanombohana ny lanonana, nitohizana ny lanonana tamin’ny filaharam-ben’ny Ankizy tao amin`ny kianja ny municipale Toamasina ary nofaranana tamin`ny fampisehoana dihy mirindra izay nataon’ ireo ankizy.
(54) Anderson RAVO : 09-06-2014 - 08:30